Samsung CHG90, 49-anụ ọhịa nyochaa 'egwuregwu' na QLED technology | Akụkọ akụrụngwa
Samsung CHG90, 49-anụ ọhịa nyochaa 'egwuregwu' na QLED teknụzụ
Ofwa nke 'egwuregwu' abụghị naanị ngwaahịa ndị dị ka kọmpụta desktọọpụ, laptọọpụ ndị a kwadebere iji rụọ ọrụ kachasị mma ma ọ bụ n'akụkụ dị ka keyboards ma ọ bụ oke. Ma ụwa a nke ndị na-egwu egwuregwu na-achọkwa ákwà ngebichi kwadebere inye kachasị. Samsung weputara ihe nlere puru iche nye ihe nile di nkpa nye onye oru choro. Nke a bụ nke ọhụrụ gị curved nyochaa Samsung CHG90.
Na mpaghara ahụ enwere ụzọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị, mana Samsung chọrọ ịpụ na mwepụta a na ogbako Gamescon nke a na-eme na Germany. Ma nke ahụ bụ nke a nyochaa maka ndị na-egwu egwuregwu nwere otu nha kachasị na nke a: sentimita 49 ịnụ ụtọ ihe oyiyi egwuregwu.
Ọzọkwa, Samsung CHG90 bụ ihe nlegharị anya - yana yana obere n'akụkụ ọ bụla. Ntugharị ya bụ 1800R, yabụ ọ ga - enyere gị aka ịbanye n’egwuregwu ahụ na - enweghị ihe ndị ọzọ na - apụ apụ. Gwa gị na akụkụ ya ruru 32: 9. Nke ahụ bụ, dị ka Samsung kwadoro n'onwe ya, size gị Samsung CHG90 bụ Ẹkot abụọ 27-anụ ọhịa Monitors na 16: 9 ruru ọnụ.
N'aka nke ọzọ, eleba anya a atụmatụ HDR na Quantum Dot technology nke ahụ ga - enyere aka inweta ezigbo agba. Na mgbakwunye, ogo ihe oyiyi anaghị efu oge dịka na teknụzụ ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, dịka akụkụ ndị ọzọ anyị nwere na Samsung CHG90 nwere oge ume ọhụrụ nke 1 millisecond. O nwere ike iru ugboro ole ruru 144 Hz. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya, ịnwere ike imeghari ya ka ọ bụrụ 60 ma ọ bụ 120 Hz.
N'ikpeazụ, Samsung achọghị ọtụtụ eriri dị n'etiti ma ya mere ọ na-ekwusi ike ọzọ na nyocha a Ịgba Cha Cha. Otu eriri maka ihe niile. Na azụ nke Samsung CHG90 ga - enwe ọdụ ụgbọ mmiri HDMI abụọ, ọdụ ụgbọ USB, mmepụta Mini DisplayPort na mmepụta nke ọdịyo. Ugbu a, ego nke a ileba anya na ị gaghị achọ nke ukwuu. Ma ọ bụ na iburu n'uche ihe niile ọ na-enye, ego a ga-akwụ agaghị adị ala: dollar 1.499 (euro 1.275 na ọnụego mgbanwe).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Samsung CHG90, 49-anụ ọhịa nyochaa 'egwuregwu' na QLED teknụzụ
Ndepụta nke ọnụ dakọtara na gam akporo Oreo
Samsung Galaxy Rịba ama 8, echi na-etinye na ndoputa site na ndị ọrụ